"Education for Myanmar Youths": How can we help?
Posted by Khin Ma Ma Myo at 4:29 AM
ခင်မမမျိုးရေ အကြံလေးကတော့ ကောင်းပါတယ်။ ဒီလို နိုင်ငံတကာ ဥပဒေတွေကို အချိုးဖောက်ခံ အလျှော့ပေးပြီး သွားမယ်ဆိုလို့ အဲဒီနည်းနဲ့ ၀င်ကူညီခွင့်ရသွားတယ်ပဲ ထားတော့ သွားတဲ့သူတွေက တရားသွားထိုင်တာ မဟုတ်တဲ့အတွက် မဟုတ်တာတွေ၊ မတရားတာတွေကို တွေ့ရရင် ရေငုံနှုတ်ပိတ် နေနိုင်လိမ့်မယ် မထင်ပါဘူး။ မီဒီယာမှာ နိုင်ငံရေးအကြောင်း မပြောပဲ နေလို့ရရင်ရမယ် အားလုံးက စိတ်ဝင်စားနေတော့ မီဒီယာ အာရုံစိုက်မှုကို ရှောင်ဖို့ဆိုတာလည်း မဖြစ်နိုင်ဘူး။ မြန်မာအနေနဲ့ မကြည့်ပဲ ကမ္ဘာ့လူသားတွေ အနေနဲ့ကြည့်ရင်တောင်မှ ကမ္ဘာသူကမ္ဘာသားတစု ရင်ဆိုင်နေရတဲ့ ပြဿနာကို တခြားကမ္ဘာသူ ကမ္ဘာသားတွေက စိတ်ဝင်စားကြပါတယ်။ စေတနာအရင်းခံကို သဘောပေါက်ပါတယ်၊ ဒါပေမယ့် တချို့လက်တွေ့မကျ ဖြစ်တာတွေကို မြင်မိလို့ ပြောတာပါ။
ကျွန်မဆိုလိုတာက မီဒီယာကို ရှောင်ဖို့ဆိုလိုတာမဟုတ်ပါဘူး။ ဒီကိစ္စကို Benthall ဆိုတဲ့ပညာရှင်တယောက်နဲ့ De Waal ဆိုတဲ့ပညာရှင်တယောက်တို့ အကြီးအကျယ် debate လုပ်ခဲ့ဖူးပါတယ်။ မီဒီယာတွေက တဘက်မှာ money raising နဲ့ awareness ကို တိုးမြှင့်ပေးနိုင်သလို တဘက်မှာလဲ ဒါတွေနဲ့ political process ကို undermine လုပ်ခံရမှာကြောက်ပြီး၊ authoritarian government တွေက aid ကို ရှောင်တတ်ပါတယ်။ ကျွန်မဆိုလိုတာက မီဒီယာအနေနဲ့တချို့ကိစ္စတွေကို အာရုံစိုက်မဖော်ပြပဲ လုပ်နိုင်တဲ့နည်းကို ဆိုလိုတာပါ။ ရေငုံနှုတ်ပိတ်နေခိုင်းတာမဟုတ်ပါ။ လောလောဆယ်မှာ အရေးကြီးဆုံးက humanitarian aid လူထုဆီရောက်သွားဖို့ပါ။
ကမ္ဘာသူ၊ ကမ္ဘာသားတွေရင်ဆိုင်နေရတဲ့ ပြဿနာကို တခြားကမ္ဘာသူ၊ကမ္ဘာသားတွေကလည်း စိတ်ဝင်စားတာမှန်ပါတယ်။ စက်တင်ဘာတုန်းကလည်း ဒီလိုပဲစိတ်ဝင်စားခံခဲ့ရပြီး ပြီးတော့လည်းပြီးသွားခဲ့ပါတယ်။ တဘက်က ကမ္ဘာကစိတ်ဝင်စားမှုချိန်ခွင်၊ တဘက်က ပြည်သူတွေအကျိုးခံစားရမှုချိန်ခွင် ကျွန်မတို့ ဘာကို ပိုလေးပေးကြမလဲ။
နောက်တချက်က ၀င်သွားသူတွေဟာ တရားသွားထိုင်တာမဟုတ်ကြောင်း ပြောထားတာမှန်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့်ဝင်သွားသူတွေဟာ လူ့အသက်၊ လူ့ဘ၀တွေကို ကယ်ဖို့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ဝင်ရတာပါ။ လူတယောက်ဓားဒဏ်ရာနဲ့ ဆေးရုံရောက်လာရင် ဆရာဝန်က အသက်ကယ်ဖို့လုပ်ပြီး၊ ရဲက တရားခံရှာတဲ့အလုပ်လုပ်ရပါလိမ့်မယ်။ ဒါကိုဆိုလိုတာဖြစ်ပါတယ်။ အဓိကက ကိုယ်လုပ်ပေးနိုင်တာကို ကိယ်အာရုံစိုက်ဖို့ပါ။
ကျွန်မမြင်တာကတော့ အိမ်တအိမ်မှာ လုံးဝတာဝန်မကျေပဲ အချိန်ပြည့် မူးရူးနေတဲ့ဖခင်တယောက်ရှိတယ်ဆိုပါစို့။ ကလေးက သွေးလွန်တုပ်ကွေးဖြစ်နေပြီ၊ အချိန်မီအသက်ကယ်ဖို့ ဆေးရုံခေါ်သွားရမယ်ဆိုရင် ဘယ်အမေမှ တာဝန်မကျေတဲ့အဖေ၊ ငွေကြေးမထုတ်ပေးနိုင်တဲ့အဖေအကြောင်းကို ထိုင်ပြောပြီး အချိန်မကုန်ကြဘူး။ ဘယ်လောက်ပဲအောက်ကျကျ၊ ဘာတွေပဲ ရင်ဆိုင်ရရင်ဆိုင်ရ ကလေးကို ဆေးရုံအမြန်ဆုံးပို့နိုင်ဖို့ကိုပဲ ကြိုးစားကြတယ်။ ဒီသဘောပါ။
Rules for international humanitarian intervention တွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး အောက်ပါစာတမ်းများမှ ကိုးကားထားပါတယ်။
Benthall , J. (1993) Disaster Relief and the Media, IB. Taurus, London, New York
De Waal, A. (1997) Famine crimes: politics and the disaster relief industry in Africa, James Currey, Oxford and Indiana University Press, Bloomington
Cobey, J.; Flanagin, A. & Foege, W. (1997) “Effective Humanitarian Aid” in Levy & Sidel (eds) War and Public Health, New York, Oxford, Oxford University Press in Cooperation with the American Public Health Association
ခင်မမမျိုးရေ လေ့လာပြီး တင်ပြပေးတဲ့အတွက်ရော အခုလို စာဖတ်သူရဲ့ မှတ်ချက်ကို အကျိုးအကြောင်း ဆီလျော်အောင် တုန့်ပြန်တဲ့အတွက်ပါ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ခင်မမမျိုးရေးတဲ့ ပညာရေးဆောင်းပါးတွေ ဖတ်ဖူးလို့ ခင်မမမျိုးရေးတဲ့စာတိုင်းမှာ အကိုးအကားရှိလိမ့်မယ် ဆိုတာလည်း သဘောပေါက်ပြီးသား ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် တချို့လေ့လာ သိရှိချက်တွေက လက်တွေ့နဲ့ ကွာဟတာတွေလည်း ရှိလေတော့ ခင်မမမျိုးရဲ့စာကို ရုတ်တရက်ဖတ်ပြီး စာဖတ်သူ တယောက်အနေနဲ့ မှတ်ချက်ပေးတဲ့နေရာမှာ emotional intelligence မရှိဖြစ်သွားပြီး တချို့အသုံးအနှုံးတွေ ရိုင်းသလို ဖြစ်သွားတာကို အထူးပဲ တောင်းပန်ပါတယ်။ အခုဒီမနက်သတင်းအရ နအဖက နိုင်ငံတကာကပေးမည့် အကူအညီကို ကြိုဆိုပါတယ်လို့ ဘီဘီစီသတင်းမှာ လာသွားတာကြားရလို့ အကောင်းဘက်ကို ဦးတည်တယ်ဆိုတာ ပြောလို့ရတဲ့တွက် ၀မ်းသာစရာပါပဲ။ မြန်မာပြည်သူတွေအတွက် အကောင်းဆုံး ဖြစ်လာပါစေလို့ မျှော်လင့်ပါတယ်။